Tababar Kusaabsan Daryeelka Caruurta Xiliga Emergenciga - Cakaara News
Tababar Kusaabsan Daryeelka Caruurta Xiliga Emergenciga
Jigjiga(Cakaaranews)Isnin 25ka July 2016. Waxaa saaka hoolka shirarka ee xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta DDSI ka furmay tababar kusaabsan daryeelka caruurta islamarkaana ay iska kaashadeen xafiiska arrimaha haweenka iyo caruuta iyo haayada UNICEF. Kaasoo ay kasoo qaybgaleen xubno tiradoodu kor udhaafayso 47 xubnood oo isugu jira shaqaalaha mashruuca daryeelka caruurta xiliga amergencyga iyo waliba qaar kamid ah shaqaalaha xafiisyada bahwadaata la ah.
Hadaba tababarkan ayaa waxaa ugu horayn furitaankiisii kahadlay wasiirkuxigeenka xafiiska arrimaha haweenka iyo caruuuta mudane Cabdifataax Axmed Gamaadiid isagoo sheegay in tababarkani yahay mid lagu baranayo daryeelka caruurta xiliga amergesiga. Wuxuuna intaa kudaray masuulku in haayada UNICEF iyo xafiisku ay kawad shaqeeyaan taageerida bulshadii aysaamaysay abaartu ee kudhaqan gobolka siti iyadoo loo aasaasay mashruuca daryeelka caruurta xiliga emergency taasoo loo sameeyay shaqaale kahawlgala mashruuca.
Wuxunna hadalkiisii ku gabagabeeyay in mashruucu uu kahawlgalo 10 center oo kala hoosyimaada 4 degmo oo katirsan Gobolka Siti islamarkaana ah degmooyinkii ay abaartu saamaysay. Waxaana laga aasaasay 10 xarumood oo ah goobaha caruurata lagu xanaaneeyo lagunasiiyo adeegyada caruurtu u baahantahay.
sikastaba ha ahaatee xukuumada DDSI oo dadaal badan ka gaysatay bulshadii abaartu saamaysay ee gobolka siti ayaa sidookale iyana dadaal kagaysateen mashruuca iskudhafka ah ee ay iska kaashadeen xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta Iyo haayada UNICEF kaasoo bil kahora taageero isugujirta lacag iyo agab gaadhsiiyay inkabadan 200 oo qoys.